admin – Page 89 – ဘ၀ ဒသန
သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် မှ ၂၀ ရက်နေ့အတွင်း ရွာသွန်းမြဲထက်မိုးပိုလာနိုင်သောဒေသများနှင့် နေ့စဥ်မိုးလေဝသ ထုတ်ပြန်ချက်
သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် မှ ၂၀ ရက်နေ့အတွင်း ရွာသွန်းမြဲထက်မိုးပိုလာနိုင်သောဒေသများနှင့် နေ့စဥ်မိုးလေဝသ ထုတ်ပြန်ချက် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် မှ ၂၀ ရက်နေ့အတွင်း ရွာသွန်းမြဲထက်မိုးပိုလာနိုင်သောဒေသများနှင့် နေ့စဥ်မိုးလေဝသ ထုတ်ပြန်ချက် သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ ယနေ့အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်များအရ မိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ ဒေသတွေကတော့ မန္တလေး ပြင်ဦးလွင် နောင်ချိုကျောက်မဲ လာရှိူ မော်လူး မော်ဟန် မော်တိတ် အင်းတော် ကသာ ဘုံချောင်း အင်းရွာ မဲဇာ ဝန်းသို ကောလင်း ချပ်ကြီး Read more
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ နိမိတ်ကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ နိမိတ်ကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ၁. ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးဟာ လူသားပေါင်း သန်း (၁၀၀) ကျော်ကူးစက်ခံရမယ် ၂. ၂၀၂၀ နဲ့ ၂၁. ခုနှစ် တွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် အဆိုးဆုံးနှစ်တွေဖြစ်တယ် စီးပွားပျက်ကပ်တွေလည်းဖြစ်မယ် ဘုရားတရားမြဲကြပါ အဆိုးတွေလာမယ် ၂၀၂၂ မှ အကောင်းဘက်ပြန်ရောက်မယ် ၃. ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိူင်ငံဟာတစ်နိူင်ငံလုံးနီးပါး ကူးစက်မှု့အများဆုံးနဲ့သေဆုံးမှု့အများဆုံးဖြစ် ကာအလောင်းများတောင်လိုပုံပြီး ကမ္ဘာမှာ အဆိုးဆုံးခံစားရတဲ့နိူင်ငံဖြစ်မယ် ၄. ကပ်ရောဂါအနည်းဆုံးခံစားရမယ့်နိူင်ငံက ဘူတန် နိူင်ငံဖြစ်မယ် ၅. ကပ်ရောဂါဟာ တရုတ်နိူင်ငံကစဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ Read more
ပုရိသတွေမငြင်းဆန်နိုင်တဲ့ မိန်းမမာယာ (၁၂)မျိုး
ပုရိသတွေမငြင်းဆန်နိုင်တဲ့ မိန်းမမာယာ (၁၂)မျိုး မိန်းမဖြစ်ပြီး မိန်းမမာယာကို မသိဖြစ်နေပါသလား။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဟောဒီက မမ ရှင်းပြပေးမှာပေါ့။ အမှန်ကလေ မိန်းကလေးဆိုတာ မွေးကတည်းက မာယာဆိုတာ ကပ်ပါပြီးသား။ မသိသေးလို့ မဖော်ထုတ်တတ်သေးတာ။ မာယာဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဆွဲဆောင်ခြင်းပေါ့ကွယ်။ တကယ်က တမင်တကာကြီး သိသိသာသာ ဆွဲဆောင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ မသိမသာလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်လို့ ဆွဲဆောင်မှန်းမသိအောင် ပြုမူနေထိုင်တာမျျိုးကို ခေါ်တယ်။ ကဲ…ဘာတွေလည်းဆိုတာဖတ်ကြည့်ပါဦး။ (၁)အမျိုးသားတွေအတွက် ဒိုင်လူကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။ ပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာကို မကြိုက်ပါဘူး။အမှန်ပါပဲ နားထောင်ကောင်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ပဲ ကြိုးစားစေချင်တယ် Read more
life StylesLeaveacomment
ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး စီးပွားဖြစ် တောင်ပို့မှို ဖောက်နည်
ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး စီးပွားဖြစ် တောင်ပို့မှို ဖောက်နည်း ဒီနည်းဟာ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ဘာမှမရှိတာမို့ အားလုံး တပိုင်တစ်နိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်သလို မြေဧက အနည်းငယ်ရှိသူတွေအတွက်လည်း စီးပွားဖြစ်ထုပ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ မှိုတစ်ပိဿာဈေးဟာလည်း ၁သောင်းကျော်နေတာမို့ မက်လောက်စရာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာက နည်းသိဖို့ပါဘဲ။ သဘာဝနည်းဖြစ်တာကြောင့် ဓာတုဗေဒဆေးဝါး ကင်းတာကြောင့် စားသုံးသူများအန္တရယ် မရှိယုံသာမက အနံအရသာဟာလည်း သဘာဝမှိုကဲ့သို့ စိမ့်ချိုနေစေမှာပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်း ၃ မျိုးသာရှိပြီး မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလွယ်တကူရှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁။ခြတောင်ပို့ အတွင်းပိုင်းမှ မြေသား၂၀သားခန့် ၂။ထမင်းဖြူ ၆၅ ကျပ်သား(တစ်ကီလို) ၃။ရေ Read more
(၅)နှစ်အတွင်း အမြန်ဆုံး ချမ်းသာနိုင်မဲ့နည်းလမ်
(၅)နှစ်အတွင်း အမြန်ဆုံး ချမ်းသာနိုင်မဲ့နည်းလမ်း (၅)နှစ်အတွင်း အမြန်ဆုံး ချမ်းသာနိုင်မဲ့နည်းလမ်း လူတိုင်းက ချမ်းသာချင်ကြပါတယ်။ ကြိုးလည်းကြိုးစားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများကို မေးကြည့်လိုက်ရင် ငါတစ်နေ့ချမ်းသာရမယ်လို့ပဲ ဖြေကြတယ်။ တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခုကိုမရဘူး။ တစ်နေ့ကြရင်ဆိုတော့ နောင်(5)နှစ် (10)နှစ်လဲ မသေချာပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကြိုးစားရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားမှာပါပဲ။ ကိုယ်ကတကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင်တော့ တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ၁။ “ကိုယ်က ငွေပမာဏဘယ်လောက်ထိ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲ ဆိုတာသိရပါမယ်” ၂။ “အဲ့ဒီငွေပမာဏကို ဘယ်အချိန်မှာပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲဆိုတာ သိရပါတယ်” ၃။ “ကိုယ်လိုချင်တဲ့ငွေပဏနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာကို Read more
ပရိသတ်တွေ သတိမထားမိခင်မှာပဲ အသက် ၆၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ငယ်ဘဝအိုင်ဒေါတွေ
ပရိသတ်တွေ သတိမထားမိခင်မှာပဲ အသက် ၆၀ ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ငယ်ဘဝအိုင်ဒေါတွေ အင်တာနေရှင်နယ်ဇာတ်ကားတွေကို သိပ်မကြည့်မိသူတွေတောင်မှ အခုပြောပြမယ့် သရုပ်ဆောင်တွေကို မျက်မှန်းတန်းမိမှာပါ။ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်နဲ့ပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး၊ ဘဝအမောတွေကို တခဏပြေစေခဲ့တဲ့ ငယ်ဘဝကအိုင်ဒေါတွေဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ အခုချိန်မှာတော့ အိုင်ဒေါတွေလည်း အချိန်တွေကြာလာတာ နဲ့အမျှ ရပ်တန့်မနေတဲ့အသက်အရွယ်ကလည်း တဖက်မှာ စကားပြောလာခဲ့ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀နဲ့ အခုနှစ်တွေမှာ တော်တော်များများဟာ ၆၀ ပြည့်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ပရိသတ်အချစ်တော်တွေကို ရေွးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)ဂျော့ကလိုနေး (၂)ဖောရက်စ် ဝစ်တိတ်ကာ (၃)မိုက်ကယ်ဂျေဖောက်စ် (၄)ဝူဒီဟာရယ်ဆန် (၅)အက်ဒီမာဖီ (၆)ဂျွန်ကော်ဘတ် (၇)တင်ရို့တ် Read more
ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးအား ထုတ်ရောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ လူရွင်တော်ဝိုင်းချစ်
ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးအား ထုတ်ရောင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ လူရွင်တော်ဝိုင်းချစ် အနုပညာလောကထဲမှာ သက်တမ်းလဲကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသလူ ရွှင်တော် သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းချစ်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်.. ဝိုင်းချစ်ကတော့ ပရိသတ်တွေကိုရီမော်ပျော်ရွှင်အောင်တင်ဆက်နိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဝိုင်းချစ်က အငြိမ့်စဉ်ပေါ်မှာသာမက ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာပါ ပါဝင်သရုပ်ခဲ့ပြီးပရိသတ်အားပေးမှုရရှိနေတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်းချစ်ပါတဲ့ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက လက်ခံအားပေးကြပြီး အငြိမ့်တွေမှာဆိုရင်လည်း လက်ခံအားပေးကြတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့အရင်အင်တာဗျုးတွေမှာ ဖြေထားပါသေးတယ်။ ခုလိုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့ အလွှာအတန်းအမျိုးမျိုးကလူတွေလည်း စီးပွားရေးကြပ်တည်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း လူရွင်တော်တွေထဲမှာနဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေမှာဆိုရင်လည်း အဆင်မပြေတဲ့လူ တွေကို အနုပညာရှင်အချင်းချင်းက ဖေးမပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာလည်း လူရွှင်တော်ဝိုင်းချစ် က ကိုဗစ်ကာလ Read more
အချုပ်ထဲက ဦးလူမင်းရဲ့ သတင်းတွေကြားပြီးပူဆွေးကာ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ဘာမှမစားတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပယ်ဦး
အချုပ်ထဲက ဦးလူမင်းရဲ့ သတင်းတွေကြားပြီးပူဆွေးကာ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ဘာမှမစားတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပယ်ဦး အချုပ်ထဲက ဦးလူမင်းရဲ့ သတင်းတွေကြားပြီးပူဆွေးကာ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ဘာမှမစားတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပယ်ဦး မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေဦးလူမင်း ဖမ်းဆီခံထား ရတာ ၄ လကျော် ၅ လနီးပါးကြာ မြင့်နေပြီဖြစ်တာ ကြောင့်ငိုရလွန်း လို့မျက်ရည် တွေတောင် ခမ်းတော့မယ်ဘာမှလည်း ရေရေရာရာမစားဘူးဆိုတဲ့ဇနီးဖြစ်သူ ခင်စံပယ်ဦး လေးလ ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ် တဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီး ဟာခုဆိုရင်ပြည်သူလူ ထုပါမကျန် အနုပညာရှင် တွေအားလုံး ဟာ အတိုက်အခိုက် အန္တရာယ် Read more
Messenger မှ ပို့လာသော ကံစမ်းမဲလင့်ခ်တွေကို နှိပ်မိထားသူတွေအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်များ
Messenger မှ ပို့လာသော ကံစမ်းမဲလင့်ခ်တွေကို နှိပ်မိထားသူတွေအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်များ Messenger မှ ပို့လာသော ကံစမ်းမဲလင့်ခ်တွေကို နှိပ်မိထားသူတွေအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်များ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်ကာ Messenger သို့ ကံစမ်းမဲ လင့်ခ်တွေဝင်ရောက်လာပြီး ပြန်လည်မျှဝေသူ များလည်း တွေ့ရှိလာရပါတယ်။ Messenger မှရောက်လာတဲ့ လင့်ခ်ကိုနှိပ်မိထားသူတွေအတွက် မိမိအကောင့်လုံခြုံစေရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်များကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မိမိသူငယ်ချင်းတွေထဲက ဒါမျိုးတွေပို့လာရင် လုံးဝမဝင်ကြပါနဲ့။ ဝင်မိပြီး အချက်လက်တွေ လိုက်ကလိတာတို့ လိုက်ဖြေတာတို့လုပ်မိခဲ့ရင် Read more
ကိုဗစ်ကြေညင့်အစားပျက်နေသူများ အစာသားချက်စိတ်ဖြစ်စေဖို့ ပုံပါအတိုင်းဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးကို မီးကင်ပြီး စားပါ။ တအားကြီးတူးမဲသွားအောင် မကင်ပါနှင့်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေးတဲ့နည်းလမ်းပါ။ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စားကြည့်ပြီးပါပြီ။အစားစားချင်စိတ် ပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။ ထူးခြားက အစားအမြန်စားနိုင်လာပါတယ်။ မူရင်း ရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။ Photo Credit to Owners ပုံပါအတိုင်းဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးကို မီးကင်ပြီး စားပါ။ တအားကြီးတူးမဲသွားအောင် မကင်ပါနှင့်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေးတဲ့နည်းလမ်းပါ။ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စားကြည့်ပြီးပါပြီ။အစားစားချင်စိတ် ပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။ ထူးခြားက အစားအမြန်စားနိုင်လာပါတယ်။ မူရင်း ရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။ Read more
Previous 1 … 88 89 90 … 128 Next